दलका उम्मेदवारहरुलाई नै मात खुवाउनेगरी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले बनाए टिम, रवि लामिछाने अटाएनन् ! – Annapurna Post News
June 20, 2022 June 20, 2022 sujaLeaveaComment on दलका उम्मेदवारहरुलाई नै मात खुवाउनेगरी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले बनाए टिम, रवि लामिछाने अटाएनन् !
काठमाडौं । दलका उम्मेदवारहरुलाई हराउने रणनीतिका साथ स्वतन्त्रबाट संसदीय चुनाव लड्ने उम्मेदवारहरुले स्वतन्त्र एलायन्स अर्थात सञ्जाल घोषणा भएको छ ।
दशकौँ लामो सक्रिय सञ्चार कर्म छाड्ने घोषणा गरेका रविका दाजु हरिशरण लामिछाने समेत संघीय संसदमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारीका साथ अरु उम्मेदवारहरुलाई समेत लिएर उनले एलायन्स घोषणा गरेका हुन् ।
टेलिभिजन प्रस्तोता छाडेका रवि लामिछानेका दाजुभाइ नै संघीय संसदको निर्वाचनमा उठ्ने भएका छन् । त्यसका लागि हरिशरणले ‘स्वतन्त्र राष्ट्रिय सञ्जाल निर्माण’ अभियानको घोषणा गरेका छन् ।
‘देशैभरका स्वतन्त्र उम्मेदवारबीच न्युनतम राष्ट्रिय मुद्दामा समझदारी कायम गरि निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिनेछ । मेरो हकमा काठमाडौ–३ बाट उम्मेदवारी दिने समझदारी भएको सबैमा जानकारी गराउँदछु,’ हरिशरणले घोषणा गरेका छन, ‘सम्भवत काठमाडौं–१ मा पुकार बम, ५ मा रञ्जु दर्शना र ८ मा सुमन सायमीले स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा गर्नुहुनेछ ।’
काठमाडौंबाहेक अन्यत्र पनि उम्मेदवार घोषणा गर्ने लामिछानेले जनाएका छन् । ‘काठमाडौं बाहिर विश्व साइकल यात्री पुष्कर शाहले दोलखाबाट प्रतिस्पर्धा गर्नुहुनेछ बाँकी कुरा यही १७ र १८ असारमा राष्ट्रिय भेलाले तय गर्नेछ,’ हरिशरणले भनेका छन् । उनीसँग पनि लामो समय रेडियो पत्रकारिताको अनुभव छ ।